Caalamka, 24 February 2019
Axad 24 February 2019
Dhageyso: Kulanka Suugaanta Caruurta ee Sweden
Wali waxa daafaha dunida ka socdo munaasabaddo lagu xusayo maalinta afka hooyo oo ku aadaneyd Khamiisti aanu soo dhaafney ee bishan Feebaraayo ay 21-ka ahayd.
Soomaali ka qeyb gashay bandhig cunto oo Dubai lagu qabtay
Magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta waxaa shalay lagu soo gaba-gabeeyay carwo dhinaca ganacsiga cuntada ah.
Booliska Turkiga oo u dhacay aqallada xubno ka tirsan militeriga
Booliska Turkiga ayaa u dhacay aqallada boqollaal ka tirsan ciidamada militeriga Jimcaha maanta, kuwaas oo lala xiriirinayo af-gembigii dhicisoobey ee July 2016.
Booliska London oo amniga kala shirey dad ay Soomaali ku jiraan
Magaalada London waxaa kulan ku yeeshay booliska London iyo xubno matalayay dadka laga tirada badan-yahay oo ay ka mid yihiin Jaaliyadda Soomaaliyeed.
Koox IS ka tirsan oo wali ku harsan Suuriya
Ciidamada uu Maraykanku taageero ayaa u dhaw inay kooxda IS ka xoreeyaan goobtii u danbaysay ee ay ka joogeen dalka Suuriya.
Dab ka kacay Bangladesh oo 70 ruux ay ku dhinteen
Dab xooggan oo burburiyay guryo badan oo ka kacay goob taariikhi ah oo ku taalla caasimadda dalka Bangladesh ee Dhaka ayaa galaaftay nolosha dad aan 70 ka yareyn.
Sacuudiga oo 20 bilyan oo doollar ku maal-gelinaya Pakistan
Pakistan ayaa la filayaa in ay abaal marinta ugu sareysa ee qof rayid ah la siiyo ay guddoonsiiso dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan Isniinta maanta ah, maalin uun ka dib markii uu saxiixey heshiis balaayiin doollar ah oo Sacuudigu uu la galayo Pakistan.